Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်)
Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Propylthiouracil သည် သိုင်းရွိုက်ဂလင်း လုပ်ဆောင်မှုလွန်ကသြော အခြေအနေမျိုးတွင်သုံးသော ဆေးဖြစ်ပါသည်။ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကို ခွဲစိတ်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ရန် မသင့်တော်သောသူများတွင် ရေဒီယို သတ္တိကြွဆေးများသုံးစွဲခြင်းတို့တွင် ထိုဆေးကို သုံးပါသည်။
Propylthiouracil သည် သိုင်းရွိုက်ဂလင်းမှ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများ ထုတ်လွှတ်ခြင်းကို လျှော့ချသောဆေးဖြစ်ပါသည်။
Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။
Propylthiouracil သည်ဆေးဗူးထဲတွင် လူနာများသတိပြုရန် ရေးသားထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးမသောက်မီ သေချာစွာ ဖတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးကို အစာနှင့်ဖြစ်စေ၊ အစာမရှိဘဲဖြစ်စေသောက်ပါ။
ဆေးတစ်ခွက်နှင့် တစ်ခွက်ကို တနေ့တာတွင် ခြားပြီးသောက်သင့်ပါသည်။
Propylthiouracil ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဆေး၂ခွက်လုံးစာပေါင်းသောက်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ပုံမှန်အချိန်အတိုင်း ပြန်သောက်ပါ။
သင်သိလိုသည်များ ရှိသော် သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Propylthiouracil ကို ၁၅ – ၃၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ်ကြား (၅၉-၈၆ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ကြား)မှာသိမ်းပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Propylthiouracil ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Propylthiouracil ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Propylthiouracil ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင် ဆေးကိုလုံး၀ မသုံးပါနှင့်။
သွေးနှင့် ရိုးတွင်ချဉ်ဆီမူမမှန်သောရောဂါများ၊ အသည်းရောဂါ၊ ကျော်ကပ်ရောဂါ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများရှိလျှင် ဆေးမသောက်မီ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန် လိုအပ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အသည်း ထိခိုက်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ (ဆီးအရောင်မဲခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ အဆက်မပြတ် ပျို့အန်နေခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အသားနှင့် မျက်လုံးများဝါခြင်း)
ကိုယ်အနှံ့တွင် နာကျင်သော အကြိတ်များပေါက်လာခြင်း
သွေးထွက်၊ သွေးခြေဥလွယ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Propylthiouracil ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အောက်ပါဆေးများသည် Propylthiouracil နှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သောဆေးများဖြစ်ပါသည်။
သွေးကျဲဆေး(warfarin)၊နှလုံးဆေး များ (propranolol, digoxin, theophylline)သည်
Propylthiouracil ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုများစေပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Propylthiouracil က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Propylthiouracil ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
စသောက်လျှင် တနေ့ကို 300mg ၈နာရီခြားတစ်ခါ ၃ကြိမ် ခွဲသောက်ရပါမည်။ သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ကြီးသော လူနာများတွင် စသောက်လျှင် တနေ့ကို 900mg သောက်ရပါမည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် ရေရှည်သောက်ရန် စသောက်ရမည့်ပမာဏမှာ တနေ့ကို 100-150mg ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Propylthiouracil (Ptu) (ပရိုပိုင်သီယိုရူရေဆေးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Propylthiouracil ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Propylthiouracil ၅၀ မီလီဂရမ် ဆေးပြား
Propylthiouracil ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Propylthiouracil, http://www.medicinenet.com/propylthiouracil/page2.htmAccessed November 10, 2016
Propylthiouracil, https://www.drugs.com/cdi/propylthiouracil.htmlAccessed November 10, 2016
Propylthiouracil, http://www.webmd.com/drugs/2/drug-8883/propylthiouracil-oral/detailsAccessed November 10, 2016